Lammii Oromoo Hundi Bagga Bara Haraan isiin ga’e!!
Barooti darban kun bara Oromoon diinan yomi iyuu caalaa dararamee fi samamee ta’uun hunda keenyaf ifaa dha. Wayyanen lafa keenya India fi Chainati gurgurte, bosoona ummaa hunda mancaftee, lammi keenya lafa irra ariatee dhagga bate akka jiratuu gootee, eemummaa Oromoo baleessa jirti. Baratoota Oromoo university hunda keessa funantee hitee xumurtee jirti, kana moo barumsaa isaan irra ariatee jirti. Kun hunda yamuu raawwtuu akka waan tokko ilee nu hin ilaleeti caalifnee birra darbuun enyuu irra ilee kan egamuu miti. Oromoo rakko kana keessatii ta’aan ilaluun hafaan utuu Oromoon rakko kana keessa jiruu rakko kana keessati dhisani du’uun ilee gubachaa jiratani du’ani ilee gubachuu dha.
Baroota darban kan Oromoo yeroo itti tasgabii fi wal amanta dhabee, olola diina fi ergamtoota Habashaootan xaxamee ture gaddan yaadatama. Sababin isaa Habashoon Oromoo lafa irra baleesuun kayyoo isaanti, garuu garaamumaa keenyan kan lafa Oromoo irratti akka ilma Oromooti gudifnee Habasha sanyii isaa jala lixee Oromoo garmalee madeessa jirachuun gaddaa gudaadha. Diina Eenyummaa keenya baleesee nu garboomfatee jiru of irra buqisuuf caaraqii yamuu goonutti Oromoo irra kan dhalatan amoo Oromoo caabsani diina jala hirrirun hamile Oromoo biyya keessa jiruu hedduu midhani jiru.
Habashoon yomilee yaaka Oromoo irratti dalaganti gabaani hin beekan, uummataa Oromoo irratti yaaka dalaguu isaani amanani hin beekan. Bara 2005 gaafa flannoo TPLF mo’aane Mootummaa waligala ijararuuf Hotel De Leopol International Baambs bira jirutti Marii yeroo tenyee Ogannon QINIJIT wara maqa lammii isaanin dhabatan waliin mootummaa tokko hin ijaranuu jeechuu irra darban, namin du’ee isiin akka ka’uu yoo caaraa argatan enyuu du’aa akka isiin ka’uu barbaduu jeedhamni gaafii gaafatamanf deebiin isaani Minilik akka du’aa nu ka’uu barbana jeedhan. Kana jeechun dhaabbilee Oromoo baleesine siirna Minilik deebifina jeechuun ibsan. Keesatuu WFDOn mirga hiree ofiin murteefachuu uummataa Oromoo sadarka tokkoffaa irratti kan fudhatee waan ta’eef dhaaba WFDO waliin hin hojeenu jeedhan, jarii kanaa dubatan haraa lubun jiru.
Oromoon rakko uummata keenya siritti hin beeknee fi hidhannoo siiyassa cimma hin qabnee ykn mallaqa argtan gara guttachuuf Angoo haarcaatuu barbadan amoo gurmuu qabsoo keenya diigan, haawwasa keenya facassani, Habasha jala hiriruuf waan guraa namaf hin tolee maqa saba Oromoon dubachaa jiru. Oromoon Habasha harma hoodhee hin beeku, Ethiopian Oromoof Haadhaa tatee hin beektuu, Garboomfatan Habasha Oromoo bilisoomsuuf qabsa’uu ilee hin jiru. Oromoon Habashaa amanee hariroo waliin ijaratuu Gantuu mallaqan bitamte ykn amoo dhigni isaa Oromoo qulquluu kan hin tanee qoofa. Habasha uummataa Oromoo fixee fi kan amoo Harma, harka fi salaa muree waliin hin deemnuu fi hariro waliin ijarachuun of gowomsudha. Wari garaaf bulanttii Bilisumman hin argamuu, ergaman buluu wan baranfi kan isaa caaluu jira jeedhan hin amanan, saba bilisomsuu dhistii of isaan ilee bilisomsuu wara dadhaban kanaaf diina Habasha jala hiriran wari garaaf jirtan.
Wagaa 40 gutuu qabsoofnee lubuu qaaqaalii waregama basa ture, “yoo isin (habasha) dimokirasi nu latan, yoo harma nu hosiftan qabsoo hidhannoo ni tobana, nu tokkomaa Ethiopiaf duna” jeedhani maqa Oromoon dubachuun salphina. Baranaa wari weeduu salphina weedisaa turan kun wagga dhufuu ilee maqa Oromootiin akka itti hin fufune fi qabsoo Oromoo Habasha jala akka hin galee goochuun dirqama. Jeequmsi ABO keessati dhalatee gara Hawwassa Diasporati ce’ee sun barumssa gudda nu latee darbeeraa, wari Bilisummaa Oromoo barbadan fi wari Angoo Barbadan adda bafachuu dandeenye jira. Wara galma qabsoo keessa ta’ee qabsoota qabsoof ba’aan hamilee cabsuu fi diina Habasha waliin dalaguu ilee baree jira. Ama kan nu hafuu wari dhuggaf mana bayee, wari saboonumaa Oromummaa fi bilisumma uummataa Oromootii amanan hidhannoo isaan cimsachuu qabu jeena. Gaafiin Oromoo utuu gaafi bilisummaa hin tanee ta’ee ABOn akka EPRP, MISON, EWP duri bada ture, hanga ama kan tureef gaafiin uummataa Oromoo kan hin deebiin waan ta’eef kayyoon sun yerro hunda akkumaa gaafi ummaticha utuu hin mofa’iin waan jiruuf. Dhaabbilee Mirga hirre of ofiin murteefan Oromoof dhaabatan hanga gaafiin Oromoo kun deebi argatutii ni jiratuu.
Bilisumman Oromoo fi duuttii dhala nama hin oluu, garuu Bilisummana Oromoo biyya Ethiopia keessati mirga xinnoo ishee argamsisuuf utuu hin tanee Oromoo-Uummani Kush Abba Ganfa Afrika ta’uu isaa mirkaneesuuf ciminan hojeechuu dha. Oromoo akkaa Ayyanalalatoon tokko tokko of xiineessan Habasha jala adeeman odeesssan kana miti. Oromoon Bilisumman Oromootii amanan, Bilisummaan feedhi uummataa keenyati, Oromoon Abba biyya Ganfa Afrika ta’uu qaba, kana goochuuf amoo human isaa fi dandeetii isaa qabna jeedhani onnee gutuun hojeechuun bakka yaanen nu ga’aa. Oromoon Bilisummaa barbaduu hundi haala duree tokko malee saba isaa salphina basuuf qabsoo bilisummaf wal dukka hirirun ama. Kanaafuu Oromoon Bilisummaf mana ba’ee dhigga qabsa’oota Oromoo dhaangala’ee fi lafee Oromoo diiree irratti caacaabee sun akka hin salphifnef Qabsoo bilisummaa eegalee barana jabinan qabsa’uun, tokkumman Bilisummaa uummataa Oromoo dhugomisinu akka ta’uu isintti dhaamnaa. Barri Kun Bara haqan haqa keenyaf falmanee Bilisumma Oromoo mirkaneesinuu nuf haa ta’uu.
Oromiyyan ni Bilisoomtii!!!